Qorshe la doonayeey in xabsiga looga saaro Cabdi Maxamuud Cumar oo fashilmay – Radio Daljir
Qorshe la doonayeey in xabsiga looga saaro Cabdi Maxamuud Cumar oo fashilmay
Agoosto 8, 2019 6:32 b 0
Dowladda Itoobiya ayaa fashilisay qorshe diyaarsan oo lagu doonayay in xabsiga looga saaro Madaxweynihii hore ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo sanad ka soo wareegatay markii la xiray.
Saraakiisha Ciidanka Booliska dalka Itoobiya ayaa sheegay iney xabsiga dhigeen Tobaneeyo ruux oo ku howlnaaa qorshahan, iyadoo iska hor imaad uu ka dhashay intii ay socotay fashilinta isku dayga lagu rabay in lagu fakiyo Cabdi Maxamuud.
Sarkaal sare oo u hadlay Ciidaamda Booliska ayaa u sheegay wargeyska Ethiopian Reporter in howlgalka dadkan lagu soo qabtay uu dhacay 5-tii bishan oo Isniintii aheyd, sidoo kalena Ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen hub fara badan.
Kooxda damacsaneyd inay xabsiga xoogga ugala baxdo ninka maxbuuska ah ayaa guri ka kireystay meel aan ka fogeyn halka uu ku xiran yahay Cabdi Maxamuud Cumar, iyadoo askari ilaalo ka hayay xabsiga uu amray Kooxdan iney gaarigooda ka qaadaan aagga uu maxbuuska ku yahay ninka, balse ay ka dhega adeegeen, maadaama qorshohooda ay wateen.
“Isku dayga ay rabeen in ay uga caawiyaan Cabdi Illay in uu baxsado oo ahaa mid abaabulan wuxuu dhacay markii uu kasoo baxay maxkamadda kuna sii jeeda xabsiga, Iska hor imaadka wuxuu yimid markii meel ku dhow xabsiga ay soo dhigteen gaari yar, lagana codsaday in ay gebi ahaanba meesha ka dhaqaajiyaan ” ayuu yiri Sarkaalkan oo magaciisa qariyay.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 216 Wararka 20823
Shaqaalaha dowladda oo la fasaxay saddex maalmood